सदृश्य भग्नावशेष निर्माण गर्न जति गाह्रो हुन्छ, अदृश्य शत्रुसँंग लड्ने कार्य त्यसभन्दा धेरै जटिल « Artha Path
सदृश्य भग्नावशेष निर्माण गर्न जति गाह्रो हुन्छ, अदृश्य शत्रुसँंग लड्ने कार्य त्यसभन्दा धेरै जटिल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदृश्य भग्नावशेष निर्माण गर्न जति गाह्रो हुन्छ, अदृश्य शत्रुसँंग लड्ने कार्य त्यसभन्दा धेरै जटिल हुने गरेको बताएका छन् । उनले पाँचौ भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा सन्देश दिँदै यस्तो बताएका हुन । उनले यो पाँच बर्षमा भएका कार्यहरुमो प्रगति पनि सार्वजनिक गरेका छन । उनले सम्भव नभएको कुरलाई पनि पुरा गरेको दावी गरे ।
पाँचौ भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको सन्देश
आजभन्दा ठीक ५ वर्षअघि २०७२ साल वैशाख १२ गते बिहान ११ बजेर ५६ मिनेटमा गोरखा जिल्लाको बारपाकमा केन्द्रविन्दु भई विनासकारी भूकम्प गएको थियो । भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट करिब ९ हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो भने मुलुकले करिव सात खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नु प¥यो । म त्यस भूकम्पमा परी आफ्नो अमूल्य ज्यान गुमाउनु भएका सबै दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरुको स्मरण र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
त्यतिबेला कतिपय, यसरी पनि सोच्दै थिए– भूकम्पबाट क्षति पुगेका लाखौंको संख्याका निजी आवास, यतिधेरै सार्वजनिक संरचनाहरु र पुरातात्विक महत्वका धार्मिक एवं साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण गर्न त सकिएला ? गल्र्याम्मै ढलेको धरहरा फेरि उभ्याउन सकिएला ? यसरी पनि तर्क गरिंदै थियो, नब्बे सालको भूकम्पपछि नयाँ सडक बनेझैं के अब पनि नयाँ सिर्जना हुनसक्लान् ?
फर्केर हेर्दा आज, विगतेका पाँच वर्षको अवधिमा हामीले भूकम्प प्रतिरोधी र आकर्षक कैयौं संरचनाहरु बनाउन सफल भएका छौं । निजी आवासतर्फ मात्रै हामीले करिव पाँच लाख घरहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौं । १ लाख ९० हजार घरहरु पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । हालसम्म ९ वटा एकीकृत बस्तीहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न भई नै सकेका छन् । थप ७० वटाको योजना स्वीकृत भई पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । यसरी व्यवस्थित र सुन्दर एकीकृत बस्तीहरु बनिरहेका छन् । ५ हजार ५ सय ९८ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छं ।
सम्पदा क्षेत्रमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणको क्रममा रहेका गरी हामीले ९१ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेका छौँ । ३२ जिल्लाका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण ४३.७ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका सम्पदाको पुनर्निर्माण ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो हाम्रा लागि चानेचुने उपलब्धि मात्र होइन ।
पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा हाम्रो अवधारणा र हामीले अपनाएको विधि विश्वका अरु देशका लागि पनि अनुकरणीय हुनसक्ने स्तरका छन् । त्यो तपाईँ हामी सबैको सहयोग, सहकार्य, दृढता र संकल्पकै कारण सम्भव भएको हो । यस अवसरमा म पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा सहयोग पु¥याउनु हुने स्थानीय जनसमुदाय, राजनीतिक दल तथ जनप्रतिनिधिहरु, निर्माणकर्मी, प्राविधिक, राष्ट्रसेवक, संचारकर्मीहरु एवं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरु सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी कार्यहरुलाई पनि हामी योजनाबद्ध ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउनरसम्पन्न गर्न सफल हुनेछौं ।